Marko Caka – Cast – Burmese Subtitle
Bridge of Spies (2015) Bridge of Spies (2015) --------------------- ဒိုနိုဗန် --- "ရူဒေါ့ဖ် ခများ စိတ်မပူဘူးလားဗျ" ရူဒေါ့ဖ် --- "ထူးသွားမှာလား ? " -------- ၁၉၅၀ များဝန်းကျင်ဆိုတာ စစ်အေးကာလပေါ့။ ရုရှားဆိုဗိယက် ယူနီယံနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ရဲ့ အဖက်ဖက်က အားပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူ လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ဆူညံနေတဲ့ အချိန်ဆိုလည်းမမှားပြန်ဘူး။ စစ်ရေးကအဆုံး နည်းပညာအလယ် ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာအဆုံး အဖက်ဖက်က ပြိုင်ဆိုင်နေကြတာဘဲဖြစ်တယ်။ ဒီထဲမှာ အကြမ်းဆုံးကတော့ နှစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ သူလျှိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ CIA နှင့် KGB တို့ရဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ အတော်ကို အခရာကျတယ်ဆိုရမယ်။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟာ တနိုင်ငံနဲ့ တနိုင်ငံကို စုံထောက်တွေ သူလျှိုတွေ စပိုင်တွေ စေလွှတ်ထားလိုက်ကြတာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာ သူတို့တွေဟာ တဖက်နိုင်ငံရဲ့ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှာ စုံးစုံးနှစ်ဝင်ရောက်နေခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်တယ်။ ၁၉၅၇ ခုနှစ် စစ်အေးကာလရဲ့ အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတစ်ခုလည်းဖြစ် သူလျှိုစစ်ဆင်ရေးတွေ အရှိန်တက်နေတဲ့ အချိန်မှာတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့မှာ ရုရှားသူလျှို ရူဒေါ့ဖ်အေဗယ်လ်ကို ဖမ်းမိခဲ့တယ်။ သူလျှိုတာဆိုတယ် သူလျှိုရုပ်မပေါက် သူလျှိုလေသံမထွက်။ ဒါ့အပြင် သူဟာ ပန်းချီတွေနဲ့ဘဲ လုံးပမ်းနေတဲ့ ...
IMDB: 7.6/10 264,899 votes
Wonder Wheel (2017) 2017 ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားတဲ့ တိုက်တန်းနစ် ဇာတ်ကားရဲ့ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့ Kate Winslet ရဲ့ Drama ကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်... ဒီဇာတ်ကားကတော့ ဇာတ်ကြောင်းကိုပြောပြတဲ့ပုံစံနဲ့ရိုက်ကူးဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ 1950 လောက်က ကိုနီ ကျွန်းမှာနေထိုင်တဲ့ ဂျင်းနီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အကြောင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျင်းနီရဲ့ ပထမအိမ်ထောင်ကနေပြီးသားလေးတစ်ယောက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ သူ့အကျင့်က ပြဿနာအမျိုးမျိုးရှာတတ်တာပါဘဲ။ ဂျင်းနီကိုယ်တိုင်ကလည်းဖောက်လွဲဖောက်ပြန်လုပ်တာကြောင့် ပထမအိမ်ထောင်ကွဲပြီးတော့ စားပွဲထိုးအလုပ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေရတာပါ။ ဂျင်းနီရဲ့ယခုလက်ရှိယောက်ျားကလည်း ချားရဟတ်မောင်းသမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အရင်မိန်းမကသေးဆုံးပြီး သမီးက လူဆိုးအဖွဲ့ကလူနဲ့လိုက်ပြေးသွားတာကြောင့် လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်ကာအရက်သမားဘဝကိုရောက်နေချိန် ဂျင်းနီနဲ့တွေ့ဆုံ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အိမ်ထောင်ရေးက အရမ်းကိုပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာမဟုတ်တော့ ဂျင်းနီတစ်ယောက် မကြာခင်မှာဘဲ မစ်ကီဆိုတဲ့အသက်ကယ်သမား နဲ့ဖောက်ပြန်ခဲ့ပြန်တယ်... ဒီလိုနဲ့ဘဝကိုရှေ့ဆက်နေရင်းတစ်နေ့မှာ ချားရဟတ် သမားရဲ့သမီးဖြစ်သူ ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့.... ဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ BS ကပရိတ်ကြီးအတူတူရှုစားလိုက်ရအောင်ဗျာ။
IMDB: 6.2/10 19,058 votes
John Wick: Chapter2(2017) John Wick2မှာတော့ပထမပိုင်းမှာသူ့ကားခိုးသွားတဲ့ရုရှားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်နဲ့သူ့သားကိုသတ်ပြီးကားကိုပြန်ယူဖို့အတွက် ရုရှားဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ရဲ့အကိုစီကိုသွားပြီးသူ့ကားပြန်ယူတဲ့အနေအထားနဲ့ဇတ်အိမ်တည်ထားပါတယ်။ John Wick ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအသတ်အဖြတ်များစွာကိုဖြတ်ကျော်ပြီးမှသူ့ကားကိုပြန်လည်ရယူ ပြီးအိမ်သို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှာသူအရင်ကအနားယူဖို့အတွက်နောက်ဆုံးအလုပ်လုပ် လုပ်ခဲ့ရာမှာ အကူအညီတောင်းခံခဲ့တဲ့သူ တစ်နည်းအားဖြင့်အမှတ်အသားပိုင်ရှင်ကသူ့အမှတ်အသားအတွက်ပြန်ပြီးပေး ဆပ်ဖို့တောင်းဆိုရာတွင် John Wick ကငြင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်......အမှတ်အသားပိုင်ရှင်ကိုမလုပ်ပေးဘဲနေမလား? ဒါမှမဟုတ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ဇတ်လမ်းလေးထဲမှာဘဲစီးမျောခံစားပေးပါလို့........ File Size – 1.94 GB Quality- Blu-Ray 1080p 6CH Running Time – 2hr 02min Format – mkv Genre – Action, Crime, Thriller Subtitle – Myanmar (Hard Sub) Translator – Aung Myint Oo Encoded By – Htet Aung Moe
The Post (2017) The Post (2017) သည် IMDb 7.2/10 Rotten Tomatoes 88% Movie Insider 3.8/5 ရထားသော ဒါရိုက်တာ Steven Spielberg က ရိုက်ကူးထား၍ Liz Hannah, Josh Singer တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Biography, Drama, History ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… အမေရိကန် သမ္မတ လေးယောက်ရယ် တိုင်းပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး သတင်းစာ ထုတ်ဝေသူ နဲ့ တကယ်အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ အယ်ဒီတာဖြစ်သူတို့ကြား သတင်းစာနဲ့ အစိုးရကြားက မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ဘယ်လို သမိုင်းနောက်ခံ အတ္တုပ္ပတ္တိကို ကြည့်ရှုရမလဲ ဇာတ်လမ်းမှာ ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ကြပါခင်ဗျာ… Reviewed credit to ...
IMDB: 7.2/10 90,484 votes
The Greatest Showman (2017) ခြူးတစ်ပြားမှ မရှိသူတစ် ယောက်အဖြစ်ကနေ ကမ္ဘာသိ ဆပ်ကပ်တည်ထောင်သူဖြစ်လာ သူတစ်ဦးအကြောင်း တင်ဆက် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပီတီဘာနမ်ဟာ ခြူးတစ်ပြားမှမရှိတဲ့ ဘ၀ကနေကြီးပြင်းလာရသူဖြစ်ပြီး အရွယ်ရောက်လို့ အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာ လည်း အလုပ်က ဒေ၀ါလီခံသွားတဲ့အတွက် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဘာနမ်ဟာ အလုပ်ပြုတ်ပြီး တဲ့နောက် သူ့မိသားစုအတွက် တစ်ခုခုတော့လုပ်မှဖြစ်မယ့် အနေအထားမှာ ဂီတနဲ့ပေါင်းစပ်တဲ့ ဆပ်ကပ်ပွဲလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့ပါ တယ်။ အဲဒါနဲ့ ဘာနမ်ဟာ သူနဲ့အ တူ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့်သူတွေကို တစ်ဦးချင်းစီ လိုက်လံစုဆောင်း ပြီး ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ အက မယ်တွေ၊ ကျွမ်းဘားမယ်တွေ၊ မျက်လှည့်ပညာရှင်တွေစသဖြင့် လူတွေအများကြီးနဲ့ မြိုင်ဆိုင်လှ တဲ့ ဘာနမ်ရဲ့ နယ်လှည့်ဆပ်ကပ် အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တည်လာပါတော့ တယ်။ ရှိုးပွဲစီးပွားရေးကို စတင်ခဲ့တဲ့ပီတီဘာနမ်ရဲ့ ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု အချိုးအကွေ့တွေနဲ့ ၁၉၁၉ လောက်က ဆပ်ကပ်ပြပွဲတွေ စတင်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားတွေ၊ ရင်းဂလင်းညီအစ်ကို၊ ဘာနမ်နဲ့ ဘေလီဆပ်ကပ် အဖွဲ့ကြီးရဲ့အ ကြောင်းတွေကို ...
IMDB: 7.7/10 162,270 votes